Shabaab oo Saaka Weerarkii ugu xooganaa ku qaaday Saldhig ay Militeriga DFS ku sugnaayeen | Baled Weyn Media Center
Shabaab oo Saaka Weerarkii ugu xooganaa ku qaaday Saldhig ay Militeriga DFS ku sugnaayeen
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabellaha Dhexe, gaar ahaan meel ku dhaw Degmada Balcad, ayaa waxa ay sheegayaan dagaalyahano ka tirsan Shabaab inay saaka weerar ku qaadeen Saldhig Ciidanka ku sugnaayeen.
Saldhigan la weeraray ayaa wuxuu ku yaala wadada xiriirisa Balcad iyo Degmada Afgooye, gaar ahaan wadada loo yaqaan Basra, dhanka Xigta Gobolka Shabellaha Dhexe, waxaana weerarka uu ahaa mid gaadmo ah oo Shabaab ay la eegteen ciidanka.
Xoogaga Shabaab oo isa soo abaabulay ayaa Saldhigan weerarka qorsheysan la eegtay, waxayna halkaasi ku dileen ciidan ka tirsan Militariga Dowladda Federalka Somaliya.
Shabaabka ayaa sheegtay inay dileen 6 askari oo ka tirsanaa ciidamada Xoogga dalka Somaliya, sidoo kalena waxa ay sheegteen inay furteen hub ciidankaasi ay lahaayeen.
War laga sii daayay Idaacada ku hadasha afka Shabaab ee Andalus, ayaa lagu sheegay Ciidamada Shabaab inay la wareegeen gacan ku haynta Saldhiga, halkaasina ay ka qaateen Lix qori oo mid ka mid ah uu yahay qoriga loo yaqaan BKM.
Saldhigan ciidamada Militariga lagu weeraray oo ku yaallo halka kala qaybisa Gobolada Shabellaha Hoose iy Shabellaha Dhexe, gaar ahaan meesha loo yaqaan Kala wareega, ayaa waxaa ku sugnaa ciidan aanan sidaasi u badneyn oo Militariga ka tirsanaa, kuwaasi oo markii dagaalka uu bilowday intoodii badneyd meesha isaga cararay.
Al-Shabaab ayaa muddooyinkaan dambe waxa ay kordhiyeen weerarada ay la eeganayaan Saldhigyada Ciidamada Militariga ay ku leeyihiin Gobolada dalka Somaliya.